Dowlada oo war farxad leh u sheegtay Soomalida ku go'doonsan K/Sudan - Caasimada Online
Home Warar Dowlada oo war farxad leh u sheegtay Soomalida ku go’doonsan K/Sudan
Dowlada oo war farxad leh u sheegtay Soomalida ku go’doonsan K/Sudan
Juba (Caasimada Online) Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay, soo daad gureynta qaar ka mid ah muwaadhiniinteed ku nool wadanka Koonfurta Sudan, oo ay muddo ka badan todobaad ka badan ka socdeen dagaalo.
Shaafici Nuur Cali Faarax oo ah xoghayaha koobaad ee safaarada Soomaalida Juba ayaa sheegay in ay billaabeen siddii ay u soo daad gureen lahaayeen Soomaalida ku go’doonsan goobaha lagu dagaalamayo sida Bor.
Isagoo la hadlaayay BBC-da ayuu sheegay in howsha daad gureenta ay kala kaashan doonan hey’addaha Qaramada Midoobay ee fadhigooda uu yahay magaalada Nairobi.
Waxaa la weydiiyay sababta hadda uu keentay in ay ku soo baraarugaan in ay muwaadiniintooda la soo baxaan iyadoo dagaalka uu socdo muddo ka badan toddobaad? wuxuu sheegay in tan iyo xilligaas ay wadeen qorshayaan bal u suura gallinaya in ay la soo baxaan muwaadiniintooda.
“Waxaan billownay in aan diiwangalino dadka ku xayiran goobaha dagaalada ay ka socdaan, kuwa warqadaha sharciga heesta waxaa loo dhoofin doonaa meelaha ay ka yimaadeen kuwa aan heesan waxaa loo sameen doonaa warqada Go Home” ayuu yiri.
Mar la weydiiyay tirada Soomaalida ku go’doonsan xerada qoxootiga ee ku taalla magaalada Bor ? wuxuu sheegay in tiradooda ay gaareyso ilaa 128-qof kuwaasoo muddo toddobaad ah helin cunto iyo biyo.
Si kastaba, waxaa jirra boob iyo bililiqo loo geestay xarumaha ganacsiga ee Soomalida lee dahay kuwaasoo ku yaalla goobaha lagu dagaalamayo sida ay lee yihiin Soomaalida ku nool dalkaas.
Dhinaca kale,warbixinno cusub oo ka hadlayo dagaalada ka socda dalka Koonfurta Sudan ayaa sheegaysa in halkaas ay ka dhaceen xasuuq dad badan oo ah dadka ku nool dalkaas iyo ajaaniibta, waxaana geestay dhinacyada ku dagaalamaya dalkaas.
Waddamo badan ayaa fursad u helay muwaadiniintooda in ay kala baxaan dalka Koonfur Afrika, balse Soomaalida ma jirto cid u maqan.